Umthamo ongaphandle ophathwayo oMkhulu 25L Shower Bag
Ibhegi enkulu yokuhlambela ngaphandle yezemidlalo enkulu, iilitha ezingama-25 zomthamo wokuhlangabezana neemfuno zakho. Izinto ze-PVC, ezinxibayo, ezomeleleyo kwaye akukho lula ukuba zibudala. ihlala ixesha elide. Ngokuqinisekileyo le yimveliso eyonyusa ulonwabo kwimidlalo yangaphandle.
Inombolo Umba: BTC097
I-Grey entsha yokufihla i-Handbag enkulu engamanzi
Isikhwama esikhulu esinamanzi manzi, esenziwe ngelaphu le-PVC, esingenamanzi kunye nesinxiba-esinganyangekiyo, akukho lula ukonakalisa. Kukho imilinganiselo emithathu ye-20L, 40L, kunye ne-60L ukuhlangabezana neemfuno zakho zokuhamba ezahlukeneyo. Ingxowa engenamanzi ilungele iimeko ezahlukeneyo ezinje ngokunyuka kweentaba, ukuhamba, ukomelela, uqeqesho, njl.
Inombolo yomba: LXD0200202002
Ubungakanani: 20L / 40L / 60L
Umbala: Umbala oluhlaza / owenziwe ngokwezifiso
Ukusetyenziswa: Ukuhamba ngaphandle
Ukukhutshwa kweArc Side yokuKhupha iBuckle kuMgangatho oPhezulu
Ukukhululwa kwe-arc enamandla kubumba obuphezulu beplastiki yentsimbi ye-POM yokubumba. Imveliso inokuvula ukungunda ngokuchanekileyo, ingqalelo kwiinkcukacha, ukuthungwa okuhle, kunye namandla elungileyo eqine. Zilungele izihlangu, impahla, iibhegi, iimveliso zangaphandle kunye namanye amashishini.
Inombolo yesitayile: SB017
imigaqo: 0.75 * 1 * 1.25 * 1.5 * 2
Iindidi: Inamandla yokukhutshwa kwecala le-arc
Iimpawu: luthambe elungileyo kunye namandla okutsala onamandla
Ingxowa yebhegi eyongezwayo yePlastiki yoKhupha iBuckle
Uyilo olugqibeleleyo, ukusebenza okungcono. Imveliso yebhakethi enesiqinisekiso selungelo elilodwa lomenzi wechiza. Zilungele iibhegi zohambo, iingxowa zokunyuka intaba, iibhegi zokugcina, iminqwazi yokhuseleko, ii-leashes zezilwanyana, njl njl. Zomelele kwaye zomelele, akukho lula ukuzinxiba.
Inombolo yesitayile: SB141-B
Iindidi: Ukukhupha icala elinamandla
Patent Umgangatho ophezulu wePlastiki yoKhupha iBuckle
Ikhonkco elinesiqinisekiso selungelo elilodwa lomenzi, umgangatho ophezulu kunye noyilo lwantlandlolo, luya kukuzisela umsebenzisi ongcono amava. Iyadibana ngokugqibeleleyo kunye noobhaka, iibhegi, iimpahla, iminqwazi kunye nezinye iimveliso yenza imveliso egqibeleleyo.
Inombolo yesitayile: SB141-A
Ukukhuselwa kwendalo esingqongileyo iPOM Khupha iBuckle
I-bhaksi ye-eco-friendly eyenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu zeplastikhi ayinazo izinto eziyingozi emzimbeni womntu, kwaye inokusetyenziselwa ngokukhuselekileyo iibhegi, iibhegi zohambo, iimpahla, iminqwazi kunye nezinye izinto. Ayiyityhefu kwaye ayinalo ivumba elikhethekileyo, kwaye ayisokuze ichaphazele impilo yabantu.
Inombolo yesitayile: SB136
imigaqo: 0.75 * 1 * 1.5mm
Izixhobo zePOM zePlastic Buckle zeZambatho
Ityebile, inkulu, inkulu kakhulu indawo yokuthwala, umphezulu ogudileyo ngaphandle kweebreyithi. Imveliso esemgangathweni esemgangathweni ikuvumela ukuba uthenge ngokulula kwaye usebenzise kamnandi. Olona khetho lulungileyo lwezinto zokunxiba kunye nemithwalo. Yizisa olona luvo lubalaseleyo lomsebenzisi.
Inombolo yesitayile: SB134